2010/2012/2015 Election » ငိုးမယွေးကော်အဆိုးဓမြလေးနော် FUEC	6
pooch says: မှတ်တမ်းတင်ဖို့ ဦးကြောင် ပြန်လာခဲ့ပါ့လား Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12176
Alinsett @ Maung Thura says: . တောက်ရှ် …. ရွှေးကော် အုတ်ကထ…. ဦးကြောင် ဖြစ်ရမှာ…
naywoon ni says: သူယွ ​ရေ ငါလည်း ​ရွေး​ကော်​ အုပ္ကထ လုပ်​ရ​ကောင်းမလားလို့ ကျန်​တဲ့ ရန်​ပုံ​ငွေ​တွေ ထည့်​မတွက်​နဲ့ဦး ကိုယ်​စားလှယ်​​လောင်း တစ်​​ယောက်​ သုံးသိန်းတဲ့ ခု အ​ရွေးခံမဲ့ သူ ၆ ​ထောင်​​ကျော်​ ဘယ်​​လောက်​ရမလဲတွက်​ကြည့်​ ။ အ​ရွေးခံရမဲ့သူက ရှိရင်​တစ်​​ထောင်​ဆို​တော့ လူငါး​ထောင်​ သုံးသိန်းစီက ဟီးဟီး ဟိုစရိတ်​ ဒီစရိတ်​ စာရင်း ပြလိုက်​ရင်​ ကိုယ့်​အိတ်​ထဲ​ရောက်​ပြီးသား Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12398
ဇီဇီခင်ဇော် says: ၂၀၁၀ တုန်းက ကြိုတင်မဲနဲ့ ညစ်တာ။
မြစပဲရိုး says: ကြောင်ကြောင် စိနပြည်မှာ မြန်မာသတင်း တွေ ကို ဒီရက်ထဲ ဘလော့လုပ်နေတာလေး ဝေဖန်ပါဦး။
FB ထဲ မှာရော ဒီကြောင် ရှိနေလား။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: ဖဘက ကြက်ဖအကောင့်ပုန်းပိုင်ရှင်ကတော့ ဒီမိုကရေစီရလို့ ပေါ်လာပြီ။
ကြောင်ကြီးခမျာမတော့ နှစ်ဖက်လုံးကို ခွတီးခဲ့တော့ ဒီမိုရလည်းမပေါ်နိုင်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.